APICMO Mpanamboatra pharmaceutique mpanjifa ho an'ny CMO / CDMO Intermediates
COMBI-BLOCKS dia mpanamboatra fikarohana sy mpanome tontolon'ny fambolena fikambanana, organika ary akora simika.
KDC, orinasam-pandraharahana ara-tsimika manokana, dia napetraka tamin'ny 1990.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. dia orinasam-pambolena iraisam-pirenena israeliana any Petah Tikva, Israely. Izy io no mpamokatra mpamokatra zava-mahadomelina lehibe indrindra eran-tany ary iray amin'ireo orinasa 15 lehibe indrindra mpamokatra pharmaceutika eran-tany.
Hoffmann-La Roche AG dia orinasa société multinational société, izay miasa manerana izao tontolo izao eo ambany sehatra roa: Pharmaceuticals and Diagnostics. Roche no orinasa pharma fahatelo lehibe eran-tany.
GlaxoSmithKline plc (GSK) dia orinasa anglisy orinasa any Brentford, Londres. GSK no orinasa lehibe indrindra manerantany amin'ny famatsian-tany, manomboka amin'ny 2015
Sun Pharmaceutical Industries Limited dia Indianina izay manamboatra sy mivarotra fanafody famonoana pharmaceuticals ary fitaovana famokarana fanafody (APIs) mazoto indrindra indrindra any India sy Etazonia.
Alfa Aesar, orinasa any Ward Hill, Massachusetts, Etazonia, dia mpanamboatra fitaovana sy fitaovana ampiasaina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fanadihadiana. Manana toerana any amin'ny firenena maro izy ireo ary manamboatra ny maro amin'ireo akora simika izay amidiny.